Street Fighter V yemahara yePC uye PS4 kutanga mangwana uye kusvika Chivabvu 5 | Linux Vakapindwa muropa
Street Fighter V yemahara yePC uye PS4 kutanga mangwana uye kusvika Chivabvu 5
Darkcrizt | | chiutsi
Capcom munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti vachabata kutongwa kwemavhiki maviri kubva Kubvumbi 23 kusvika Chivabvu 5.. Munguva iyi yenguva, vese avo vanofarira kugona kuyedza zita iri vachakwanisa kudhawunirodha Street Fighter V kuburikidza neSteam kana chitoro che PlayStation mahara.
Iyo yekuyedza vhezheni ye Street Fighter V ichave nekwaniso yeArcade, Versus, Dambudziko uye Kudzidzisa modhi. Iyo yekutanga 16-hunhu roster ichave inogona kutamba, pamwe neveDLC mavara Juri, Menat, Blanka, uye zvakanyanya kukosha, Gouki (Akuma).
Arcadian: Yakaunzwa muStreet Fighter V: Arcade Edition, iyi modhi inokutendera kuti udzore zvekare zvakapfuura zvinyorwa zvakateedzana. Kana iwe uchikwanisa kukunda ese makomputa anodzorwa nevapikisi pasi pemamiriro akasiyana siyana, iwe unogona kuvhura anopfuura mazana maviri akasarudzika mifananidzo neakasiyana maartist anogona kutariswa muIye Garari.
Zvichienderana: tamba uchipesana nemumwe mutambi wepano kana nekombuta ine nhanho dzakasiyana dzekunetseka.
Zvinetso: dzidza maitiro ekushandisa yega yega hunhu mune madhemoni uye kudzidzira kana kuona kuti inguva yakareba sei iwe yaunogona kurwira muKupona mode.
Kudzidziswa: Dzidzira kupokana neyekunyepedzera AI apo iwe paunoyedza kuvaka, combos, uye kujairira hunhu pasina kumanikidzwa kwemutambo chaiwo.
Kune avo vanotova nemutambo, asi vasati vawana Gouki nechimwe chikonzero, kuitenga (kana chero mamwe mavara eDLC) panguva yekuyedzwa kuchachengetedza kufambira mberi kwawakaita navo uchivashandisa mahara.
1 Street Fighter V yemahara kwemavhiki maviri
1.1 Zvinodiwa kuti ukwanise kuyedza
2 Street Fighter V anouya kuzosangana nemukwikwidzi wake ...
Street Fighter V yemahara kwemavhiki maviri
Muedzo wepachena Ichatanga musi waApril 23 na1 PM PT uye ichave iripo kusvika Chivabvu 5 PT.
Munguva ino, vanhu vane kufarira kurodha pasi mutambo uye vane yavo PS4 pIvo vanogona kubata mutambo kubva ku PlayStation Chitoro nekungobaya bhatani «Edza mahara demo».
Street Fighter V ichave iripo yekutamba isingaenderane nemunhu wese, asi chete avo vane PlayStation Plus kunyorera ndivo vanozokwanisa kuwana izvo zvemutambo online zvigadzirwa.
Kana iri iyo PC vhezheni, iyo yekuedzwa vhezheni inongowanikwa chete pane Steam. PC vatambi vanoda kuyedza Street Fighter V vanogona kuikanda kubva kune Steam mutengi nekungobaya "Tamba" kana muyedzo wemahara wawanikwa.
Iyo yekuyedza vhezheni inosanganisira anokwana makumi maviri anotamba mavara, kusanganisira yekutanga rosta yegumi neshanu pamwe chete nevane mavara eDLC muchimiro cheAkuma, Blanka, Juri, uye Menat.
Kubva muna Kubvumbi 23, Capcom irikubatawo kutengesa kune mamwe epakakurumbira emumigwagwa Fighter V mapakeji..
Iko kutengesa kuchasanganisira iyo Ryu neChun-Li koshitimu mapakeji pamwe neCapcom koshitomu paki, iyo inosanganisira crossover zvipfeko kubva kune mamwe maCapcom mitambo senge Monster Hunter, Dhiyabhorosi May Kurira, uye Darkstalkers.
Zvinodiwa kuti ukwanise kuyedza
Processor: Intel Core i3-4160 pa 3.60GHz
Ndangariro: 6GB RAM
Mifananidzo: NVIDIA® GeForce® GTX 480, GTX 570, GTX 670, kana zvirinani
DirectX: Shanduro 11
Network: Broadband internet yekubatanidza
Kadhi rezwi: DirectX inoenderana kadhi rezwi kana chipset chakabatanidzwa.
Zvimwe Zvinyorwa: Inoenderana neXInput uye DirectInput USB zvishandiso, zvinosanganisira mapadhi emitambo uye matanda eArcade akavakirwa paXbox 360, Xbox One, uye vatungamiriri veDualShock. Steam Controller inotsigirwawo.
Street Fighter V anouya kuzosangana nemukwikwidzi wake ...
Kana iri nguva ye nei iyi yemahara muedzo yakatangwa yeStreet Fighter V yemapuratifomu, Zviri pachena pachena seMortal Kombat 11 ichaburitswa pasi rese mangwana.
Anenge makore makumi matatu apfuura, aya mazita maviri akakwikwidza makamuri mumatende epasirese, uye zvakanakisa kuvaona vachiri mu30.
Iwindo remazuva gumi nematatu inguva huru yekutarisa Street Fighter Vsezvo ichizadzwa nevatambi vatsva, iyo inozowirirana yekumaka yekugadzira ye newbies.
Aya ndiwo maratidziro eSteam ne PlayStation ayo iwe auchazoda kushanyira mangwana.
Pazuva iro, playstation link inofanira kuva nebhatani "Edza mahara demo" kuruboshwe, uye peji re Steam inofanira kungova nayo sarudzo ye "Tamba".
Panguva yekunyora aya mabhatani ekubatanidza mabhatani haasati awanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Street Fighter V yemahara yePC uye PS4 kutanga mangwana uye kusvika Chivabvu 5
Sigma Dzidziso: Spy Simulation Vhidhiyo Game Inowanikwa muKutanga Kuwana
Microweber: yakakwana kwazvo zvemaneja zvemukati